Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Dalka Austria » Awstaria: Ma jirin qaxooti Afgaanistaan ​​ah oo la rabay!
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Wararka Dalka Austria • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Chancellor -ka Austria Sebastian Kurz
Dhibaatadu waxay tahay “is -dhexgalka dadka reer Afgaanistaan ​​waa mid aad u adag” waxayna u baahan tahay dadaal ballaaran oo Awstaria aysan hadda awoodi karin, ayuu yiri Kurz. Waxay inta badan haystaan ​​waxbarasho heerkoodu hooseeyo iyo qiimayaal gabi ahaanba ka duwan marka loo eego dadka kale ee dalka, ayuu tilmaamay, isaga oo intaa ku daray in in ka badan kala bar dhallinyarada Afghanistan ee ku nool Austria ay taageereen rabshadaha diimeed.
Awstaria ma rabto qaxooti Afgaanistaan ​​ah oo dambe.
Dhexgalka dadka reer Afgaanistaan ​​ee bulshada reer Galbeedka waa “mid aad u adag”.
Awstaraaliya waxay hore u martigalisay bulshada afaraad ee ugu weyn afgaanistaan ​​ee adduunka.
In ka badan 123,000 oo qof oo rayid ah ayaa Kabul ay ka dhoofiyeen Mareykanka iyo xulafada reer galbeedka kadib markii caasimadda Afghanistan ay gacanta u gashay argagixisada Taliban bartamihii bishii Ogosto.
Inta badan qaxootigaas Afgaanistaan ​​waxaa magangelyo laga siin doonaa USA, laakiin Midowga Yurub wuxuu kaloo oggolaaday inuu qaato 30,000 oo ka cararaya Afgaanistaan.
In kasta oo Jarmalka iyo Faransiisku muujiyeen rabitaan ah inay qaabilaan qaxootiga, Austria waxay ka mid ahayd waddammada sida qumman u diiday fikradda imaanshiyaha Afgaanistaan ​​oo badan.
Chancellor -ka Austria Sebastian Kurz ayaa ku dhawaaqay in Austria ay horey u haysatay muhaajiriin ku filan Afghanistan, waddankuna uusan ka qayb qaadan doonin dib u dejinta qaxootiga Afgaanistaan ​​ee laga soo daadgureeyay Kabul ka dib markii ay Taliban la wareegeen.
Sebastian Kurz ayaa ku sheegay wareysi uu maanta siiyay wargeyska La Stampa ee Talyaaniga.
Kurz wuxuu ku adkaystay in mowqifka dawladda Austria ee arrintani ay tahay mid “waaqici ah” oo aysan micnaheedu ahayn inay jirto midnimo la’aanta caasimadaha kale ee Midowga Yurub ee dhinaca Vienna.
“Ka dib markii in ka badan 44,000 oo reer Afgaanistaan ​​ah ay yimaadeen dalkeenna sanadihii la soo dhaafay, Awstaria waxay mar hore martigelisay bulshada afaraad ee ugu weyn bulshada Afgaanistaan” qof walba, ayuu Chancellor -ku xusuusiyay.
Dhibaatadu waxay tahay “isdhexgalka dadka reer Afgaanistaan ​​waa mid aad u adag” waxayna u baahan tahay dadaal ballaaran oo Awstaria aysan hadda awoodi karin, ayuu yiri siyaasiga muxaafidka ah ee 35 jirka ah. Waxay inta badan haystaan ​​waxbarasho heerkoodu hooseeyo iyo qiimayaal gabi ahaanba ka duwan marka loo eego dadka kale ee dalka, ayuu tilmaamay, isaga oo intaa ku daray in in ka badan kala bar dhallinyarada Afghanistan ee ku nool Austria ay taageereen rabshadaha diimeed.
Vienna ayaa weli doonaysay inay caawiso dadka reer Afgaanistaan ​​ee dhibaataysan, maadaama ay u qoondeysay 20 milyan oo yuuro si ay uga caawiso dalalka dariska la ah Afgaanistaan ​​dib u dejinta qaxootiga, ayuu yiri Kurz.
Laakiin kii Midowga Yurub siyaasadaha laga soo bilaabo xilliyadii dhibaatadii muhaajiriinta ee 2015 - markii boqolaal kun oo qof oo ka soo cararay colaadaha Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe loo oggolaaday inay ku biiraan ururka - “xal uma noqon karo Kabul ama Midowga Yurub”, ayuu yiri Kurz .
Hoggaamiyaha Austria ayaa ku adkaystay inay “hadda u caddaatay dhammaan dawladaha Yurub in la wajaho socdaalka sharci -darrada ah iyo in xuduudaha dibadda ee Yurub la sugo si loo xaliyo dhibaatadan.
Sebastian Kurz ayaa aaminsan in Midowga Yurub ay tahay inuu ka shaqeeyo sidii loo jebin lahaa “qaabka ganacsiga” ee dadka wax tahriibiya ee dadka gaarsiiya Yurub. Ku saabsan muhaajiriinta, waa in lagu soo jeestaa xuduudaha Midowga Yurub oo dib loogu celiyaa dalalkii ay ka yimaadeen ama waddamada saddexaad ee nabdoon.
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Hadda Soo Dhawee ...
St. Regis San Francisco ayaa ku dhawaaqday mid cusub ...
Wadnaha Barnaamijka Waxbarashada Ameerika ee IMEX
Muddo intee le'eg ayay Lacag -bixinta dambe Saameysaa Dhibcahaada Deynta?
Qalab -dhaliyaha naaftada cusub ayaa ku dhawaaqay Generac Mobile
Cathay Pacific Airways oo ku laabatay Pittsburgh ...